Ny mpivady, ny loholona roa, ny taranaka telo mitovy endrika amin'ny endrika famolavolana!
Home / Interior design / Ny mpivady, ny loholona roa, ny taranaka telo mitovy endrika amin'ny endrika famolavolana!
2021 / 07 / 27 FisokajianaInterior design 5351 0
Volavola fonenana aorian'ny taona 80
Nanomboka nividy trano nohatsaraina ny vondrona antonony, izay andry iankinan'ny fiaraha-monina. Manoloana ny toe-javatra misy ny taranaka telo miara-miaina, miaraka amin'ny antitra sy ny tanora eo ambany, ary ankehitriny ny firenena dia nanokatra ny politikam-pianakavian'izy telo mianadahy. Karazan-trano inona no afaka mamaly ny filan'ny fianakavian'ity karazana fianakaviana ity?
Ity efitrano ity dia trano fisaka misy efitrano fatoriana misy efitrano efatra misy mpivady mipetraka ao. Olona antitra roa sy vavy roa. Ny rafitry ny fianakaviana misy olona valo ao anatin'ny telo dia manaitra ny olona maro. Tsy izany ve ny fanjakako ho avy?
Amin'ity tranga ity dia noravahan'ny mpamorona endrika anatiny tsy miandany ny atitany mba hahafenoany ny fenitra kanto rehetra. Ny faritra iraisana dia ny toerana iarahan'ny fianakaviana mandany fotoana betsaka indrindra. Efitrano fandraisam-bahiny lehibe sy ahazoana aina ary misokatra no ilaina.
Ny famolavolana sofa modular dia malefaka be ary afaka mifanaraka amin'ny filàna isan-karazany. Tsy ho feno vahoaka ny fianakaviana rehefa mijery sarimihetsika sy miresaka eto.
Ao amin'ny faritra fidirana, amina satana kely kely no ampiasaina handrafetana ny tsipika ho endrika zigzag. Ny fitaratra fiakanjoana sy ny seza mipetraka dia mifanaraka amin'ny filan'ny fiomanana isan'andro alohan'ny hivoahana. Raha misy zokiolona ao amin'ny fianakaviana dia tena ilaina ny famolavolana ny dabilio manova kiraro.
Ny kabinetra fitehirizana lehibe dia mahatonga ny akanjon'ny fianakaviana sy ny kirarony hanana fitahirizana milamina kokoa. Ny kabinetra miloko hazo dia misy toy ny sakana tsy voavolavola eny amin'ny habakabaka. Ireo fitaovana ireo dia atambatra amin'ny fahatsapana ny fahamendrehana.
Mampahafinaritra ny mahandro ny faritra fisakafoana misokatra. Mipetraka manodidina ny latabatra ny fianakaviana ary fomba fanao isan-karazany ny sakafo tsirairay.
Ny efitrano fidiovana dia kely habe ary tsotra ny endriny. Afa-tsy ny faritry ny fandroana, dia vita amin'ny simenitra bitika sy veneer hazo avokoa izy rehetra. Amin'ny maha-trano fidiovana vahiny, dia tsy misy rivotra tsara izy io, fa azo tazomina ho maina foana.
Ny trano fidiovana ao anaty rindrina dia madio sy tsotra, tsy misy fiafarana maty hanadiovana. Ny faritra fandroana avo dia zarazaraina amin'ny vera mba hahatratrarana ny vokatry ny fisarahana mando sy maina.
Ny efitrano fatoriana dia kasaina hatao suite. Ny fianakaviana iray miaraka amin'ny taranaka telo dia tokony hanana toerana manokana an'ny mpivady. Ny feo curry creamy dia ampiasaina mandritra ny famolavolana ny faritra iray manontolo. Ny volon-doko malemy sy malefaka dia mety hahatonga ny olona hahatsiaro ho maivamaivana indrindra.
Ny toerana fialan-tsasatra eo amin'ny lavarangana no toerana tsara indrindra handehanana raharaha isan'andro, ary fotoana fitsaharana ho an'ny fanahy no dikany tsara indrindra fonenan'ireo monina ao aminy.
Ny efitra fandroana lehibe dia vita amin'ny marbra fotsy sy fotsy misy veneer hazo. Ny faritry ny fandroana dia misaraka amin'ny vera mangarahara mba hamerenana amin'ny laoniny ny hatsarana voajanahary amin'ny habakabaka sady manome antoka ny fiasan'ny be indrindra.
Ireo efitrano fandraisam-bahiny roa dia manana fomba mitovy amin'ny endriny, miaraka amin'ny loko maitso maitso manome fahatoniana sy fampiononana. Ny fandriana kambana koa dia natao hifanaraka amin'ny fomban'ny zokiolona.
Ny efi-trano tsirairay dia misy latabatra kely, koa na dia tsy ilaina ny mamaky teny sy manoratra aza, dia safidy mety amin'ny fitsaharana na fitahirizana zavatra izany.
Ny efitran'ireo zanaka roa vavy dia namboarina miaraka am-pandriana fandriana mba hamonjy toerana malalaka kokoa ho an'ny lalao. Tsy misy lohahevitra sariitatra tafahoatra sy ravaky miloko. Ny paleta miloko tsy miandany sy ny fisehosehoana tsotra dia ahafahan'ny ankizy manafaka ny toetrany.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia mandray ny asa maro fanasan-damba sy fanasana vy. Ny kabinetra vita amin'ny namboarina dia manana ny mpanasa lamba sy ny fanamainana tafiditra ao anatiny, ary tsy misy kabinetra mihantona azo tehirizina. Ny famolavolana ny fizarazaran-tany dia mahatonga ny habaka tsy hahakivy kokoa.
Previous :: Mitady ny renivohitry ny Lanna fahizay, milentika ao amin'ny spa Royal taloha | DDDD Next: 95% amin'ny olana mihidy dia azo vahana miaraka amin'ity andiany iray ity!
2021 / 08 / 15 5408
2021 / 08 / 15 5982
2021 / 08 / 15 5743
2021 / 08 / 14 5422
2021 / 08 / 14 5982
2021 / 08 / 14 5172